ESI MEE KA PASENT NKE BATRỊ BURU IBU NA PASENT NA GAM AKPORO - N'IHI BEGINNERS - 2019
Esi mee ka pasent nke batrị buru ibu na pasent na gam akporo
N'ọtụtụ gam akporo igwe na mbadamba, batrị a na-akwụ na ogwe ọnọdụ dịka "ọkwa zuru ezu," nke na-adịghị enye ihe ọmụma. N'okwu a, enwere ike ịmegharị ihe ngosi batrị na pasent na ogwe ọnọdụ, na-enweghị ngwa atọ ma ọ bụ wijetị, mana njirimara a zoro ezo.
Ihe nkuzi a na-akọwa otú ị ga-esi jiri pasent batrị na-eji ngwaọrụ ndị a rụpụtara na Android 4, 5, 6 na 7 (a na-enyocha ya na gam akporo 5.1 na 6.0.1 mgbe ederede), nakwa banyere ngwa ngwa dị mfe nke nwere otu ọrụ - Na-agbanye usoro ntọala zoro ezo nke ekwentị ma ọ bụ mbadamba, nke bụ ọrụ maka igosipụta pasent nke ịcha. Ọ nwere ike ịba uru: Ndị kachasị mma maka gam akporo, Batrị na gam akporo na-ahapụ ngwa ngwa.
Rịba ama: Na - emekarị, ọbụna na-enweghị nsonye pụrụ iche, a ga-ahụrịrị pasent nke batrị fọdụrụnụ site na mbụ ịpịpụ ákwà ngebichi n'elu ihuenyo ahụ, wee mee menu ngwa ngwa (nọmba ọnụego ga-apụta n'akụkụ batrị ahụ).
Batrị pasent na gam akporo na ngwaọrụ ngwaọrụ-arụ ọrụ (System UI Tuner)
Usoro mbụ na-arụ ọrụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ Android ọ bụla na nsụgharị nke usoro ahụ ugbu a, ọbụnadị mgbe ndị na-emepụta ihe mepụtara onye na-ekpucha ya, dị iche na android "dị ọcha".
Ihe kachasị mkpa nke usoro ahụ bụ iji mee ka nhọrọ "Gosi batrị batrị na pasent" na ntọala zoro ezo nke System UI Tuner, ebe ọ bụbu na gbanwere ntọala ndị a.
Nke a ga-achọ ihe ndị a:
Mepee ákwà mgbochi ka ị wee hụ bọtịnụ ntọala (gia).
Pịa ma jigide ngwa ahụ ruo mgbe ọ malitere ịkpụgharị, wee hapụ ya.
Ntọala ntọala mepee na ngosi na "agbakwunyewo UI Tuner System menu." Buru n'uche na ọ bụghị mgbe nile ka a na-enweta usoro 2-3 ọ bụla (ọ gaghị ahapụ ya ozugbo, dị ka ntụgharị nke nkedo malitere, ma mgbe ihe dịka nke abụọ ma ọ bụ abụọ).
Ugbu a na ala nke ntọala ntọala, mepee ihe ọhụrụ "System UI Tuner".
Kwado nhọrọ "Gosi ọkwa batrị na pasent."
Emela, ugbu a na ọnọdụ ọnọdụ na mbadamba ụrọ gam akporo gị ma ọ bụ ekwentị ga-egosi ụgwọ dị ka pasent.
Iji ikikere batrị Enabler (Batrị na pasent)
Ọ bụrụ na ị nweghị ike ịgbanye System UI Tuner, ị nwere ike iji ngwa ngwa Batrị Percent Enabler (ma ọ bụ "Batrị na pasent" na nsụgharị Russian), nke na-anaghị achọ ikikere pụrụ iche ma ọ bụ ohere mgbọrọgwụ, kama ịdabere na ngosipụta nke percentages. batrị (na usoro usoro anyị gbanwere na usoro mbụ bụ nanị na-agbanwe).
Mepee ngwa ahụ ma dọọ nhọrọ "Batrị na pasent" akara.
Ị na-ahụ ozugbo na pasent nke batrị ahụ malitere igosipụta n'elu (n'ọnọdụ ọ bụla, enwere m nke a), ma onye mmepụta na-ede na ịkwesịrị ịmalitegharịa ngwaọrụ ahụ (gbanye ya na ọzọ).
Emeela. N'otu oge ahụ, mgbe ị gbanwechara ọnọdụ ahụ site na iji ngwa ahụ, ị ​​nwere ike ihichapụ ya, pasent ego ga-apụ n'anya ebe ọ bụla (ma ị ga-agbanyeghachi ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanyụ ngosipụta ngosipụta ọnụego).
Ịnwere ike ibudata ngwa ahụ na Ụlọ Ahịa Play: //play.google.com/store/apps/details?id=de.kroegerama.android4batpercent&hl=en
Nke ahụ niile. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dị mfe ma, echere m, ọ gaghị enwe nsogbu.